Kwinqaku elithi "Indlela yokususa isikhumba esikhankanywe ngeminwe" siya kukuxelela indlela yokwenza ulusu lwezandla luhle. Izandla zethu zingenye yezona ndawo zikhangeleka kwaye zintle zomzimba. Bahlala behamba, behlala bebona. Ibhinqa linyamezela kwaye lithintela abantu, kwaye imvelo ithathele ingqalelo ukuba izandla zowesifazane ziba nesichukumiso sesondo esomeleleyo.
Kodwa izandla zethu zixhobo zethu zokusebenza. Izandla sisebenza kwiibhedi, sihlambulula izitya, sithwala iiphakheji ezinzima kunye nemveliso, sichitha izinto. Sinokuxhalabisa njani ngezandla zethu zihle kwaye zilungele kakuhle. Yintoni oyifunayo ukwenza ukuba bahlale behle kakhulu? Ukunyamekela kwezandla zakho akunzima, njengoko kubonakala ngathi ekubonweni kokuqala, kwaye siya kukwabelana ngokuvuya, iimfihlelo zokunyamekela izandla ukwenzela ukuba ulusu ezandleni zakho alubi, kodwa luthando kwaye luvalo.
Imithetho yokunyamekela kwezandla kwimihla ngemihla
Ukuze ugcine ulusu kwizandla zakho ixesha elide kwaye liphilile kwaye lincinci, kufuneka ufunde imigaqo embalwa.
1. Musa ukukhangela kwiiglavu. Ukuba izandla zakho zidibanisa kunye neenjini zokucoca (iilisi zokucoca, ukuhlamba izandla, ukuhlamba iiplanga kunye nempahla) kunye nokudibanisa namanzi, kufuneka ugqoke iiglavu zerabha. Ngaloo ndlela, ukhusela isikhumba sezandla zakho kwiikhemikhali nakwi-corrosion ngamanzi. Iiglavu kufuneka zibe mkhulu kakhulu ukuba zingabanqandeli ukucima ulusu. Kwaye ngaphambi kokuba zigqitywe, kufuneka uthule i talc encinane ngaphakathi kweiglavu, ngoko ziya kususa kalula. Ukongeza, ngaphambi kokuba ubeke iiglavu zerabha ezandleni zakho, kufuneka zifakwe igrisi ngokukhusela okanye ukhilimu onamafutha, ngenxa yokuba i-rabber kwisikhumba esincinci sezandla inefuthe elibi.
2. Iiglovu ziyinto ebalulekileyo ebomini. Basebenza kakuhle kumyezo, kwaye ukuba usebenza isahlulo sesepha kwiziko lakho ngaphambili, ukungcola ezandleni zakho kuya kuhlamba kwiibali ezimbini.
3. Musa ukulibala ngeiglavu xa kubanda ngaphandle, kwaye kungekhona ebusika kuphela. Ngentwasahlobo, nini
esitrato umoya obandayo, umoya omanzi ekwindla, konke oku kunokwenza isikhumba esibucayi sezandla zakho ukuba senze udibaniso. Abo banqwenela ukuhamba ngaphandle kweiglavu ebusika, balindele ukubukeka, ukungabonakali kokubonakala, ukuma, ukugubha kweentende kunye nentlungu, kwaye ungakulibali.
4. Musa ukuthenga isepha esincinci. Uluhlu oluhle lwesepha olusisiseko kunye nokongezwa kancinci, isepha ye-antibacterial, yangasese encane. Emva kokuhlamba, kufuneka usule izandla zakho ezomileyo, ukuze izandla zingenamanzi ompompo, ekhupha isikhumba.
5. Izihlandlo eziliqela ngosuku kufuneka uhlambulule izandla zakho ngekhilimu ephuculisayo, kwaye oku kufuneka kuthathwa njengesiqhelo. Ukuba uya kuphuma ilanga evulekile, kufuneka ugube iintende zakho nge-sunscreen, ngaphandle koko emva kwexesha isikhumba kwiintendelezo siyakubonakala sibe mnyama kunombala womzimba wakho.
6. Ebusuku, gcoba izandla zakho ngekhilimu kunye nokongezwa kwe-lactic acid okanye urea (unokukwazi ukugcina umswakama emzimbeni). Ngamanye amaxesha unokugcoba izandla zakho ngepetroleum jelly ngaphambi kokulala, ngomhla olandelayo baya kukukholisa ngothintelo oluthambileyo kunye nesikhumba esikhuselekileyo.
7. Izandla kufuneka zisetyenziswe. Ungasebenzisa izilungiso zasekhaya, ezihlala zikhona. Ingaba yinyosi, ushukela kunye netyuwa, yongezwa kwisikhilimu esimuncu, indawo yekhofi. Ungafuni ukuthatha inkqubo enjalo ngezandla zakho, kanye kanye okanye kabini ngeveki, kukulungele ukuyenza ngelixa uthabhisa ibhebha. Musa ukulibala ukwenza oku kwinqanaba lomgca.
Kwizandla ezomileyo zesikhumba
Ukuba unomileyo, unesikhumba esikhathekayo, sebenzisa iingcebiso ezininzi:
1. Yenza amabhavu afudumeleyo kunye nokongezwa kweetyuwa okanye ioli. Baya kunika amandla kwaye bathambile kwisithintelo. Amafutha abalulekileyo aphucula kakuhle isikhumba, kwaye ityuwa isusa iindawo eziphezulu ze-epidermis, ngelixa zivula isikhumba esilula, esilungisiwe. Emva kokuhlamba izandla zakho, sebenzisa ukhilimu ophuculisayo kunye nondla. Ngethuba lokusetyenziswa kwekrimu, unokwenza i-massage kakuhle ezandleni zakho.
2. Ngethuba lokuxilisa igazi liphuma ekhumbeni, ukujikeleza kwegazi kuvuselelwa, ulusu luyondla i-oksijeni, ukubonakala kukuphucula. Kwizandla zikhona amanqaku amaninzi, ukuba zivuselelwe, unokutshintshelwa kakuhle umzimba.
3. Nsuku zonke, welula iminwe yakho, yenzele i-gymnastics.
4. Ubumnandi obunqabileyo buya kuphuma ngaphandle kobuncwane bokukhanya. I-manicure iyigqabi esipheleleyo kwibala lezandla.
Indlela yokunciphisa kunye nokugqithisa isikhumba ezandleni zakho
Ukuphucula isikhumba nge-oatmeal
I-Mask ye-oatmeal yinto efanelekileyo yokunciphisa isikhumba. Le maski inokubambisana ngokuthe tye ukuba isetyenziswe ebusweni. Sifaka kwi-mixer engaphezulu kwe-¼ indebe ye-oat flakes okanye i-oatmeal kwaye ingalindelekanga kumgubo. Ufanele ufumane i-¼ indebe ye-oatmeal. Ukuba ufumana ngaphantsi, masiqaphele ngakumbi. Dlulisa umgubo kwisitya esikhulu kwaye wongeza enye isipuni se-aloe juice okanye uncibilikise amanzi uze uxoke.
Siza kufaka le slurry ezandleni kunye nakusesikhumba. I-masat ye-Oatmeal isetyenziswe kwizibonda, i-cuticles, kunye namanxeba eminwe. Ngaphantsi kwemizuzu emi-3 okanye emihlanu gubha i-gruel, uze uhlambe ngamanzi ashushu kwaye uhlambe izandla kakuhle.
Umsiki weoli yeoli kunye nomgubo wengqolowa
Ama-Masks anegalelo ekukhutsheni ama-cell cell efile, kwaye apho ulusu lukhuni khona emva kwesandla aluqhelekanga. Kodwa le mask iyingqayizivele, iphucula ukujikeleza kwegazi, ibangela ukuhlengahlengiswa kwezicubu, ityhila isikhumba.
Beka ikota yeekomityi, isisombululo seoli se vithamini E, iipunipoyi ezi-2 zeoli yezolimo, kwi-saucer enzulu kunye nokuxuba. Sibamba izandla ngaphantsi kwetafile, siza kufaka i-gruel phezu kwezandla, izibonda, i-cuticles, kwidibene nganye. Eyona nto ibaluleke kakhulu ukuba siyixubise ubuninzi kule ndawo apho isikhumba sineentlobo ze-pigment. Emva kwemizuzu emi-5, hlamba izandla zakho ngamanzi afudumele kunye nesepha, ngokufanelekileyo uketshezi kwaye usule. Le maski yenziwa kanye ngenyanga.
Mask of their papaya
Ii-enzyme, eziqulethwe kwi-papaya, zinceda ukukhupha isikhumba, ukususa iiseli ezifileyo eziphezulu kwesikhumba. Ukuba umntu unesikhumba esibuhlungu kakhulu, ukuba umntu unesifo se-dermatitis, i-cuticles yenziwe kwi-cuticles, ngoko akudingeki ukuba wenze i-mask ye-papaya.
Makhe sisebenzise intwana encinane yepapaya de kubekho ubunzima obufanayo. Thatha i-tablespoon enye yobunzima kwaye usebenzise ebusweni bezandla, ngelixa ungayikhohlwa malunga neekticticles. Emva kwemizuzu engama-1 okanye emi-2, hlamba izandla. Le maski yenziwa kabini ngenyanga.
Ukunyamezela okukhulu kwesikhumba sezandla
Ngaphantsi kwefuthe lomoya kunye namaqondo aphantsi okushisa, ulusu luba buhlungu, luqhekeke kwaye lome. Ngamanye amaxesha, iintluko ezandleni zaphuma. Ngokukodwa ebusika, kufuneka ukhuthaze ngamandla izandla zakho.
Hlanganisa isipuni se-Vaseline kunye nepunipoon 1 ye-lanolin. Emva koko sibeka umxube ezandleni zakho kunye nezandla zesikhumba, ngokukodwa kwiindawo zomnwe nakwi-cuticle. Shiya la mafutha ngamaminithi angama-20 ezandleni, ngaphantsi kwefuthe lokushisa komzimba, le mafutha aya kutyumbela aze atyeke ekhumbeni. Emva koko sihlamba izandla zethu ngeesepha. Kwiinyanga ezibandayo zasebusika, le nkqubo yenziwa rhoqo.
Amathisipuni amabini e-baking soda enye yeglasi yamanzi iya kwenza ulusu olunzima lube luhle kwaye lubonakalise. Ukuba songeza ulwandle oluncinane okanye ityuwa emanzini, kuya kuqinisa izipikili kunye nokukhupha isikhumba sobomvu. Kwaye ukuba ezandleni zikhona izikratshi, ukusika, ukugaya kunye nokuqhekeka, siya kuxhasa izandla kwisisombululo esibuthakathaka se-potassium permanganate. Kwaye ngokunyuka kwezandla, ukuhlamba kwee-3 teaspoon zeviniga kuya kunceda ngeglasi yamanzi.
Iibhati ezivela kwizityalo
- Ikhumba elivuthayo liyahlanjululwa kwaye liyancitshiswa kakhulu ngamabhafu aphuma kwi-nettle, i-lime okanye i-chamomile.
- Ukulungiswa kwesikhumba kunceda i-decoct bark.
- Ukuhlamba kwe-bran kuzokwenza kube luhlaza kunye nokunciphisa isikhumba
Dlulisa iglasi yamanzi abilayo kwisitya esikhulu, wongeze isahlulo seglasi. Masilinde i-bran ukuze sifumane ukushisa komzimba kwaye sifake izandla zethu khona imizuzu emine okanye emihlanu. Emva kokuphela kwenkqubo, sihlamba izandla zethu ngamanzi afudumele kwaye sisula.
- Ukuba ulusu lwezandla luya kubomvu ngenxa yokuba iqondo lokushisa liphantsi kwisitrato, kuyakuncedo ukusebenzisa i-decoctions yeetatate. Ukuba yonke imihla uhlambe kunye ne-decoction yee-litate, unokukhawuleza ukubuyisela umbala wesikhumba. Ubungakanani bebhati ibinama-20 okanye imizuzu engama-30.
- Ukunciphisa nokondla indawo ezinzima zesikhumba, sisebenzisa iiteyiti zesitashi. I-tablespoon yesitashi iphulwa ngetitha yamanzi abilayo, eli lwelo lusetyenziswa kwifom efudumele. Iinkqubo zenziwa nganye imihla. Inkambo yokuphila iqukethe iiseshoni ezili-15 okanye ezingama-20.
- Beka ezandleni zomxube: siza kubonga iitapile kwi-grater, yongeza i-teaspoon yobusi, amaconsi ambalwa eqhamo, imifuno okanye i-lemon juice. Kwizandla zibeka iindidi zezitata eziluhlaza. Senza le nkqubo ngokuphindaphindiweyo kwaye isikhumba sakho siya kulubala kwaye senze lula.
- Ukususela kwesikhumba esiqhaqhaqileyo sibheka kwi-whey, umhluzi wezambane, ukusuka kwi-sauerkraut. Emva kweetreyi ezinjalo, sibagcoba isikhumba nge-cream cream kwaye sibeke izandla zakho kwiiglavu ze-wool. Sisebenzisa i-oyile i-oyile yemifuno, isahlulo esifanayo, ngoko siza kugoba izandla nge-napkin.
Ezi bhati zigcinwa ngaphambi kokulala. Emva koko sigqoke isikhumba seoli ecocekileyo okanye i-oyile yemifuno, ukuze ulusu lubuyele ubuhle kunye nokuthoba.
Ngoku siyazi indlela yokususa isikhumba esikhwele kwiminwe yakho. Ukunyamekela ngoncedo kudinga ixesha elide kunye neengqalelo, yenza njalo, kwaye lilungele yonke imihla. Uku landela ezi ngcebiso, uya kuba nokukwazi ukuyeka izandla zakho ukuba ziyeke ukuba zikhuni, kodwa zibe zithenda kunye ezimnandi. Izandla zakho zifanele zikhangele kakuhle, ulusu kumgca kufuneka lube mnandi kwaye luthambile. Oku kuyimfuneko ukuba ufuna abantu babe nomnqweno wokubanga izandla zabo, kwaye abafazi banomona womona omhlophe.
Indlela yokucoca isisu - iindlela ezilula kunye ezifanelekileyo
Ukupheka kwamadoda ukuba abe mncinci kwaye abe mhle
Yintoni okufuneka uyenze nawe kwiholide?
Shish kebab evela kwiintliziyo zenkukhu kwi-tomato marinade
Magic jewel kwizinto ezintsha zeCartier Magicien
Ephakathi kwendawo yokuhlala kwisitayela sase-Art Nouveau
I-phobias yentlalo nezindlela zokuzinqoba
Vumela ipeni lakho, intombikazi: yenza umtshato womtshato
Ukuphilisa iipropati ze-cranberry